février 8, 2019 Autres
Ary ny fanahin’Andriamanitra nanomba tambonin’ny rano. Efa nomen’Andriamanitra ny karamako, satria nomeko hovadin’ny vadiko ny ankizivaviko; dia nataony hoe Isakara ny anarany. Ireo no loham-pirenena avy tamin’i Regoela tany amin’ny tany Edoma; ireo no zanak’i Basemata, vadin’i Esao. Mandehana eo alohako, ary asio elanelany eo amin’ny isan-toko. Misotroa, sady hampisotro ny ramevanao koa aho: Mandosira hamonjy ny ainao; aza miherika ianao, na mijanona eny amin’ny tany lemaka rehetra; mandosira any an-tendrombohitra, fandrao haringana ianao. Ireo rehetra ireo no zanak’i Ketora.
Tsia, fa Saraha vadinao hiteraka zazalahy aminao; ary ny anarany dia hataonao hoe Isaka; ary ny fanekeko haoriko aminy ho fanekena mandrakizay ho an’ny taranany mandimby azy. Iny no tompoko, dia nandray ny fisalobonana Rebeka, ka nisalobonany. Dia nisy hariva, ary nisy maraina, andro voalohany izany. Ahoana no anontanianao ny anarako? Ry anabavinay, tongava alinalina anie ianao, ary aoka ny taranakao hahazo ny vavahadin’izay mankahala azy. Aoka hiarina ny raiko ka hihinana amin’ny hazan’ny zanany, mba hitsofan’ny fanahinao rano ahy.
Iny no tompoko, dia nandray ny fisalobonana Rebeka, ka nisalobonany. Roahy io malaagasy io sy ny zanany; fa ny zanak’io andevovavy io tsy hiray lova amin’ny zanako, dia amin’Isaka. Izaho no Andriamanitr’i Abrahama rainao; aza matahotra, fa momba anao Aho ka hitahy anao sy hahamaro ny taranakao noho ny amin’i Abrahama mpanompoko.
Nanonofy izahay, ka tsy misy malagash ny heviny. Tsy nisy vehivavy janga teo.
Enga anie ka Isimaela no ho velona eo anatrehanao! Izaho no Esao zanakao mslagasy. Tsy teto va no mbola velona aho aorian’ny fahitana?
Andriamanitra efa nahamaro ahy teto amin’ny tanin’ny fahoriako. Izaho koa nanonofy, ka, indro, niloloha karaba telo feno mofo fotsy aho; 17 ary teo anatin’ny karaba ambony indrindra dia nisy ny fihinan’i Farao samy hafa karazana rehetra fanaon’ny mpanao mofo; ary nohanin’ny vorona teo anatin’ny karaba izay nololohaviko izany.
Izany no nolazain-dralehilahy tamiko, dia nankeo amin-dralehilahy izy; ary, indro, mbola nijanona teo anilan’ny rameva teo am-pantsakana ralehilahy. Aoka re mba tsy hisy ady amintsika roa lahy, na amin’ny mpiandry ombiko sy ny mpiandry ombinao, fa mpirahalahy isika.
Nofiko fa indro, hono, nitsangana teo amoron’i Neily aho; 18 koa, indreo, nisy ombivavy fito matavy sady tsara tarehy niakatra avy teo Neily; ary nihinana teny amin’ny bararata ireny.
Tsy handringana Aho, raha mahita dimy amby efa-polo ao.
Ary nipetraka tandrifiny izy, dia nanandratra ny feony nitomany. Efa antitra izao raintsika, ary tsy misy lehilahy ambonin’ny tany hanambady antsika araka haiboly fanaon’ny tany rehetra; 32 andeha hampisotrointsika divay ny raintsika dia handry aminy isika hananantsika fara avy amin’ny raintsika.
Andeha isika hanao tanàna sy tilikambo ho antsika, ka ny tampony hahatakatra ny lanitra, dia hanao izay hahazoantsika laza, fandrao hiely eny ambonin’ny tany rehetra isika. Chapitre 33 1 Ary Jakoba dia nanopy ny masony ka nahatazana fa indro tamy Esao, mitondra efa-jato lahy. Tsaroako izao malaasy fahadisoako: Nahoana no mifampijery foana ianareo?
Hanisy soa anao tokoa Aho, ka baibolj maro ny taranakao ho tahaka ny fasika any an-dranomasina, baoboly tsy azo isaina noho ny hamaroany.
Ny menarana no namitaka ahy, ka dia nihinana aho. Dia nanaiky ny rahalahiny.
Izany no nanaovana ny anaran’ny tanàna hoe Zoara. Avy any amin’ny tany Kanana izahay mzlagasy hividy hanina. Maroa fara sy mihabetsaha ary mamenoa ny tany, ka mampanompoa azy; ary manjaka amin’ny hazandrano ao amin’ny ranomasina sy ny voro-manidina ary ny biby rehetra izay mihetsiketsika ambonin’ny tany. Aza maninjitra ny tananao amin’ny malagays, ary aza maninona azy mlagasy ianao; fa hitako izao fa matahotra an’Andriamanitra ianao, ka tsy narovanao tamiko ny zanakao, pf ny lahitokanao.
Mbola manana ato koa va ianao? Ary Esao dia nanandratra ny feony ka nitomany. Anabaviko izy; fa natahotra hilaza hoe: Tsy mba hanozona ny tany intsony noho ny amin’ny olona Aho; fa ny fisainan’ny fon’ny olona dia ratsy hatramin’ny fahazazany; ary tsy mba handringana ny velona rehetra intsony Aho tahaka izay nataoko. Ary nomeny azy ireny, dia nandry taminy izy, ka nanan’anaka taminy ravehivavy. Aoka ny tany haniry ahitra sy anana mamoa ary hazo fihinam-boa izay mamoa, samy araka ny karazany avy, ka manam-boa ao aminy, eny ambonin’ny tany; dia nisy izany.
Ny Baiboly – Tenin’Andriamanitra. Ho ato amiko no halehanao; fa ny dodaiman’ny zanako no efa nakaramako anao tokoa. Aza samponanareo aho, fa Jehovah efa biboly ny alehako; alefaso aho mba hankany amin’ny tompoko.